Diraa gara himata lakkoofsaatti jijjiira.
Barruu: Diraa lakkoofsa bakka bu'u dha.
Val faankishiniitti fayyadamuun,diraa lakkoofsa bakka bu'u gara himata lakkoofsaatti jijjiiruu ni dandeessa.Kuni faallaa faankishinii Str ti. Yoo gamisni diraa qofti lakkoofsa of keessaa qabaate, arfiileen diraa jalqabaa sirriin qofti ni jijjiiramu. Yoo diraan lakkoofsota kamiyyuu of keessaa hin qabu ta'e, faankishiniin Val gatii 0 deebisa.